Liza Nebel Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Liza Nebel
Liza ndiye Mutungamiri, COO, uye Co-Muvambi weBlueOther, AI chikwangwani chechirongwa chinobatsira makambani kukunda makwikwi. Liza apedza makore makumi maviri ekupedzisira achityaira marangi uye nzira dzekutengesa dzeAT&T, Visa, DRM, American Express, Barclays, Time Warner, IBM, nevamwe. KuBlueOcean, Liza arikutungamira kubhadharisa kuvaka michina-yekudzidzira masystem anogadzirisa matambudziko uye anopa ruzivo padanho rakakura uye nekumhanya. Nebasa rake, Liza akagamuchirwa muSF Bhizinesi Times 'Vane zana Vakadzi Bhizinesi Varidzi.
Chitatu, December 16, 2020 Chitatu, December 16, 2020 Liza Nebel
Gore rega rega, kunyanya patinosvika kumazororo nekufungisisa pamisangano isingakanganwike yegore, kune hondo dzisingaverengeke dzekuona kuti ndeapi mabhenefiti akafadza vateereri. Nekunetseka uye kusava nechokwadi kwakaunzwa nedenda gore rino, kune hondo nyowani, uye ino nguva ihondo yehutano hwedu. Sezvataichinjika nekuita zvese kubva kumba, takaona kuti denda rakafambisa sei ramangwana rekusimba. Vakangwara pamusha zvishandiso senge